Difaaca Barcelona ee Gerard Pique oo sheegay xilliga uu ka fariisanayo kubadda cagta – Gool FM
(Barcelona) 25 Okt 2021. Waxaa hubanti ah in Gerard Pique uu ku jiro waayihiisii ugu dambeeyay xirfaddiisa kubadda cagta, waxaana difaaca Barcelona uu ku gooddiyay inuusan ciyaartan ka fariisan doonin illaa uu dareemo inuu da’ weynyahay.
“Maalin hore ayaan noqday ciyaaryahanka ugu da’da weyn ee Barcelona gool ugu dhaliyay tartammada Yurub, taasna way isii yareysay” ayuu u sheegay saxaafadda kaddib ciyaartii xalay kooxdiisa laga adkaaday.
Waxa uu Pique intaas sii raaciyay inuu dareemay farxad weyn marka uu haddana arkay isagoo difaaca ugu goolasha badan kula sinnaaday halyeyga Real Madrid ee Roberto Carlos, isagoo dhinaca kale sheegay inuusan dareemeyn inuu haatan joogo xilligii uu fariisan lahaa maadaama uusan duqnimo dareemeyn.
“Isuma arko inaan duq ahay, dabcan xoogaa, marka aan arko anigoo doorkii aan qaadan jiray mid aanan ahayn markaas waan bixi doonaa.
“Waxaan ku fariisan doonaa Barcelona, taas waa hubanti, wax aanan aqbali doonin ayaase ah inaan kursiga keydka fariisto, haddii uu xilli ciyaareedka ka harsan yahay saddex bilood markaas aan aqbali keydka” ayuu hadalkiisa sii raaciyay difaaca hore uga fariistay ciyaaraha xulka qaranka Spain.
Dhinaca kale, 34-sano jirkan ayaa qiray inay Barcelona tabeyso Lionel Messi isagoo ku tilmaamay xaalad adag marka ay koox weyso midkii ugu fiicnaa taariikhda sida uu isaga hadalka u dhigay, waxaana uu intaas sii raaciyay inay kasoo kaban doonaan waayahan adag isla markaana ay heli doonaan hoggaamiye kaalintii Messi qaata.
Si kastaba ha ahaatee, Barca oo xilli ciyaareed liita qaadaneysa kaddib laacibka Paris Saint-Germain ayaa shalay guuldarro kale kala kulantay Real Madrid ciyaartii El Clasico ee La Liga ka tirsaneyd taasoo ka dhacday Camp Nou inkastoo uu gool dhaliyay Sergio Aguero kulankii Blaugrana lagu lagday 1-2.